Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Usulelo lwangoku lwe-COVID kwiiNdawo eziHolide kwiiLwandle
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuhamba ngexesha le-COVID-19 kuthetha ukuba kufuneka ulungele ukumangaliswa kunye notshintsho olukhawulezayo lokuhamba. Ngokusekwe kumanani anamhlanje izinga losulelo kwi
Iindawo zolwandle zifikelela phantse kwi-12,000 ukuya kwi-zero ngokusekwe kwinqanaba losulelo kwindawo ekuyo kubudlelwane nabahlali abasisigidi esinye.
Ezinye iindawo zolwandle emhlabeni ziyavulelwa kwakhona ukhenketho kunye nokhenketho, ezinye zenzelwe kuphela abahambi abagonyiweyo.
Abahambi abaninzi bajonge ukuphumla kwezinye iilwandle zomhlaba ezidumileyo, kodwa bafuna ukuhlala bekhuselekile kwaye besempilweni.
Ngaphandle kokujonga izithintelo zohambo kwaye kusekwe kwidatha evela Ihlabathi, eTurboNews ukudibanisa uluhlu. Inika igalelo kwimeko yangoku ye-COVID-19
Kunzima ukujonga amanani ayinyani. Ilizwe elincinci ngokuqinisekileyo linamanani asezantsi xa kuthelekiswa nelizwe elikhulu.
Kule thelekisa, eTurboNews baxhomekeke kumthwalo wangoku weentsuku ezi-7 zokugqibela ze-COVID-19 ngokunxulumene nesigidi esinye sabemi. Amazwe anabantu abangaphantsi kwesigidi esinye abalwa ngokomlinganiso wokucinga ukuba kukho abantu abasisigidi.
Ngokusekwe kule nombolo iBritish Virgin Islands ene-11,989 yamatyala e-COVID-19 asebenzayo kwiintsuku ezi-7 ezidlulileyo, kubonakala ngathi yindawo yokufikela elunxwemeni enemiceli mngeni emikhulu, ngelixa i-Oman enamacala angama-zero inokuba yenye yezona ndawo zikhuselekileyo nabani na anokuphumla kuzo.
Akukho nombolo yomlingo, kwaye ezinye izinto zidlala indima, kodwa iindawo ekufikelelwe kuzo zingaphantsi kwe-1000 zosulelo ngesigidi ziya kuvula ukhetho oluhle lweelwandle kwabo banokuhamba ngokukhuselekileyo.
Umzekelo weCaribbean ngummandla apho kungekho siqithi sifana nomnye. I-British Virgin Islands inelona nani liphezulu lokuphantse kube li-12,000 lesifo, xa kuthelekiswa neGrenada enelona nani lisezantsi kwiCaribbean elinama-27 kuphela. Bhahamas, IJamaica, iSt. Lucia, okanye iRiphabhlikhi yaseDominican ziphakathi kweqela lamazwe elinokuthi libonwe njengomngcipheko ophantsi.
Iilwandle zase-Oman, eyona ndawo iphantsi i-COVID yayo nayiphi na indawo yokufika elwandle: ZERO
E-Seychelles, inani losulelo olutsha lwehle nge-8% kwiveki ephelileyo, kodwa ngamatyala asebenzayo angama-555 kwilizwe labantu abangama-98,000 +, inqanaba lisenokubonakala liphezulu. ISipro, iMartinique, iCuba, okanye iSpain zikwimeko efanayo.
Inani lamatyala asebenzayo e-COVID kwisigidi kwiindawo zokuchitha iiholide elwandle
ukusuka kweliphezulu ukuya kwelona lisezantsi:
Iziqithi zeBritish Virgin: 11,989
ISipro: 5,468 XNUMX
ICosta Rica: 1,466
Ukudibana kwakhona: 1,463
Mzantsi Afrika: 1,401
UMartin oNgcwele: 1,219
I-Trinidad neTobago: 1,033
USint Martin: 991
IFrench Polynesia: 708
ISri Lanka: 527
ICabo Verde: 482
IiTurks kunye neCaicos: 407
ISaint Kitts kunye neNevis: 261
INgcwele uLucia: 249
ISaudi Arabia: 238
IRiphabhlikhi yaseDominican: 230
Antigua kunye neBarbudda: 121
I-Vincent kunye neGrenadines: 99
ISao Tome kunye nePrincipe: 63
IPapua New Guinea: 33
I-Ivory Coast: 16
ENew Zealand: 10
ISierra Leone: 6